I-China Best 3 point hitch pto rotary tiller yeTekta Ngogandaganda Nabakhiqizi | UZhicheng
I-Rotary tiller ingumshini wokutshala ofaniswe nogandagisi ukuqedela imisebenzi yokulima nokukhipha. Ngenxa yekhono layo lokuchoboza inhlabathi enamandla futhi indawo eyisicaba ngemuva kokutshala, isetshenziswe kabanzi; ngasikhathi sinye, ingasika umhlanga ogcwatshwe ngaphansi komhlaba, okulungele ukusebenza kwe-seeder futhi unikeze umbhede omuhle wembewu wokuhlwanyela kamuva.
Lesi sitshalo se-rotary sinemisebenzi yokwaphula phansi kwephansi, sibuyisele emuva ukwakheka kwenhlabathi, sithuthukise umthamo wokugcina umswakama womhlaba, siqede ukhula oluthile, sinciphise izifo zezitshalo kanye nezinambuzane ezinambuzane, silinganise umhlabathi, siphakamise nezinga lezolimo. ukusebenza kwemishini.
1. Ukuhanjiswa: ukuqhutshwa kwamaketanga.
2. Igiya lebhokisi legreyidi lenziwe ngensimbi yensimbi.
3. Ukuma kweplate yokumiswa kwenziwa ngokusika kwe-laser, indawo yokubumba.
4. Chain yedivaysi yesandla iyakwazi ukuguquguqulwa.
5. Kufakwa amapuleti okuvikela uhlangothi kufakwe emuva.
6. Ukuphakama okulimazayo kungashintshwa.
7. Ama-blade angaphansi kokusebenzelana okushisayo nokuhlolwa okukhethekile
Umshini womshini osindayo ojikelezayo
I-Adapable adapter yangemuva yokuphepha nokuhlinzeka ngokuphelela okubushelelezi ~ 6 ama-blade amaningi aqinile ngefreyithi ngayinye yokugcwaliswa okuphelele kwenhlabathi ephezulu ~ ukuphakama okuguqukayo skids yokulawula ukujula ~ ukwakheka okuqinile kwempilo ende nokuthembekile.
Izinzuzo zemboni yethu
1. Sesichithe imishini epulazini isikhathi esingaphezu kweminyaka eyi-10.
2.Sinezindawo ezihlonyelwe kahle kanye nohlelo lokulawula ikhwalithi enhle kakhulu.
3. Ifektri yethu etholakala embonini yepaki ngokuhamba okulula.
4. Singakwazi ukukhiqiza ngaphezu kwe-2000 isetha ama-rotary tiller ngenyanga.
Esedlule: I-point hitch pto ugandaganda wokuqeda mower nge-ce
Olandelayo: Amaphuzu amathathu hitch tiller / 3 4 5 6 7 ft rotary tiller athengiswa
I-3 Point Hitch Rotary Tiller
3 Iphoyinti Hitch Tiller
I-3 Poil Tiller Iyathengiswa
Ama-3 Poil Tillers Okwagandaganda
3 I-Pt Tiller